GV Face: Nandresy i Trump. Dia Ahoana Izany? [Vaovao nohavaozina] · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2016 19:15 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, বাংলা, Ελληνικά, اردو, English
Tao anatin'ny fitsibadihan-draharaha mahavalalanina, nandresy tamin'ny fifidianana ho filohan'i Etazonia i Donald Trump. Mahatsiaro mandray anjara amin'ity fifidianana ho filoham-pirenena Amerikana ity tahaka ireo fifidianana vitsivitsy teo aloha izahay na dia tsy afaka mifidy any Etazonia aza ny maro avy ato amin'ny Global Voices.
Izany no mahatonga anay, tonga eto hiresaka miaraka momba ny vaovao farany avy amin'ny fifidianana Amerikana isaky ny alarobia izay natomboka tamin'ny 26 Oktobra : hilaza ny fanantenana, ny ahiahy ary ny tahotra.
Amin'ny 9 Novambra ny tantara farany amin'ity andian-dahatsoratra ity miaraka amin'ny vokatra, ifanaovana amin'i Elizabeth Rivera, mpifidy Amerikana monina any Chile, sady tonian-dahatsoratra Amerikana Latina, amin'i Lauren Finch mpifidy Amerikana monina any Espaina sady Toniam-baovao, amin'i Ellery Biddle, mpifidy Amerikana monina any Etazonia Talen'ny Advocacy ary Mong Palatino, Tonian-dahatsoratra Azia Atsimo atsinanana, monina any Filipina.
Hiresaka momba ny mpandresy sy ny resy amin'ity fifidianana ity izahay, ahoana ny fahatsapanay momba ny iray amin'ireo fotoam-pifidianana malaza indrindra amin'ny tantaran'ny Etazonia ary inona no dikan'izany amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany misy anay.
Manantena anareo hiaraka aminay izahay amin'ny 9 Novambra , amin'ny 5 ora hariva GMT.
Afaka mijery ny fifanakalozan-kevitra roa farany eto ianao: